Ahoana ny fanovana ny teny miafin'ny root an'ny iPad jailbroken | Vaovao IPhone
Raha vaovao amin'ny tontolon'ny jailbreak ianao (ary bebe kokoa raha nanao an'ity dingana ity niaraka tamin'i Pangu ianao) dia tokony ho fantatrao fa ilaina izany ovay ny teny miafina faka (fidio amin'ireo fitaovana mampidi-doza amin'ny iPad) hisorohana ny fidiran'ny olona ratsy toetra ao amin'ny fitaovanao ary mangalatra vaovao na miteraka fahasimbana tsy azo ovaina amin'ny fitaovanao. Indrindra raha nametraka OpenSSH ianao (izay ilaina matetika). Ao amin'ny Actualidad iPad dia mampianatra anao izahay hanova ity teny miafina antsoina hoe faka ity mba hidirana amin'ireo fitaovana "mampidi-doza" kokoa izay mety hanimba ilay fitaovana raha ampiasaina "ratsy". Aorian'ny fitsambikinana.
Manova ny teny miafin'ny root an'ny fitaovana jailbroken anao
Tonga dia mankany amin'ny dingana tokony harahintsika isika. Voalohany, tsy maintsy mametraka ny Terminal (Mobile Terminal) isika, ho azy:
Midira an'i Cydia
Tsindrio ny «Search» ao amin'ny menio ambany
Mikaroha "Mobile Terminal" ary ampidino amin'ny fitaovana ampiasainao
dia Ampidirinay ny rindranasa vao napetraka (Mobile Terminal) ary arahinay ireto dingana manaraka ireto hanovana ny teny miafina root an'ny fitaovantsika:
Soraty amin'ny toerana misy anao ny "su root" ary kitiho ny bokotra "Return"
Hisy lahatsoratra hiseho: Teny miafina; Tsy maintsy ampidirintsika ny teny miafina root root: «alpine '. Ampahafantarinay izany ary tsindrio «Miverina» indray. (Aza manahy raha tsy manoratra eo amin'ny efijery ianao rehefa manoratra dia normal izany, raha manoratra ianao)
Manaraka, aorian'ny fidirana tsara ny teny miafina root root, dia miditra isika: "Passwd" ary avy eo dia hanoratra ny teny miafina vaovao, izay rehetra tadiavinay. Ary ampidirintsika indray izy hanamafisana azy.
Izay no izy, vitantsika ny nanova ny teny miafisialy mpampiasa (faka) tena lehibe hisorohana ny olona ratsy toetra hiditra amin'ny fitaovantsika voafonja sy hanao hetsika ratsy miaraka amin'ny tenimiafina efa voafaritra. Avy amin'ny iPad News Manamafy izahay fa ny fanovana ny tenimiafinao matetika dia tsy midika hoe voaaro zato isan-jato amin'ireo mpampiasa ratsy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fanovana ny teny miafin'ny root an'ny iPad jailbroken anao
Manaraka ity sazy ity i Apple ary manaisotra ny "Tsiambaratelo" ao amin'ny App Store Breziliana